Wasiirad Fowsiyo: “Ma jiro heshiis dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ka gaareen dhinaca badda” | Salaan Media
Wasiirad Fowsiyo: “Ma jiro heshiis dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ka gaareen dhinaca badda”
Wasiirka arrimaha dibadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Marwo Fowsiyo Xaaji Aadan ayaa ka warbixisay kulan ay dhowaan la yeelatay Wasiiradda arrimaha dibadda dowladda Kenya, waxayna sheegtay in kulankoodu uu la xidhiidhay sidii ay labada dowladood ay u xoojin lahaayeen xidhiidhka arrimaha Siyaasadda, Dhaqaalaha, Ammaanka iyo Iskaashiga derisnimo.
Marwo Foosiya waxay sheegtay in kulanka ay la yeelatay Wasiirada arrimaha Kenya Aamina uu ka dhashay go’aanadii ka soo baxay shirkii toddobada wadan ee Geeska Afrika ay go’aansadeen inay xidhiidhkooda xoojiyaan, isla markaana si wadajir ah uga shaqeeyaan dhinacyada ammaanka iyo horumarka dalalkooda.
“Ma jiro heshiis Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay gaareen dhinaca badda” ayay tiri Wasiirad Fowsiyo oo sheegtay inay been abuur yihiin warar sida ay sheegtay uu qoray Websitka Somalitalk, waxayna ku eedeysay shabakadaas inay saxiixeeda been abuurteen ayna ku dhejiyeen qoraalka ay soo bandhigeen.
Dhinaca kale Wasiirada ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday heshiis horay u kala saxiixdeen Dowladii KMG ahayd iyo Dowladdii hore ee Madaxweyne Mwai Kibaki kaasi oo ku saabsanaa xuduuda badaha Soomaaliya.
Wasiiradu waxay caddeysay isla markaana hoosta ka xariiqday in xuduuda badaha ay kala leeyihiin dalalka Soomaaliya ay yihiin sidii loo asteeyay, isla markaana xuduuda badda ee Soomaaliya ay sideedii tahay oo aanay jirin cid isticmaaleysa ama sharcigu u ogolaanayo inay ku manaafacaadsato.
Warqadii laygu been abuurtaa oo saxiixeyga ay ku soo dhejiyeen websitka somaltalk waxuu u qornaa sidatan: